तनहुँ घटनापछि देउवामाथि दबाब, अब काँग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक « रिपोर्टर्स नेपाल
(Friday 22nd January 2021)
तनहुँ घटनापछि देउवामाथि दबाब, अब काँग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक
प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७७, शुक्रबार
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा बुधबार पुल उद्घाटन गर्न रोकेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले तरंग ल्याएको छ । बेहोश अवस्थामा रहेको काँग्रेस फेरि जुर्मराएको छ । सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढेको छ ।
देउवाले आज तनहुँ घटनाका अलावा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक डाकेका छन् । बैठकले समग्र देशको राजनीतिक र काँग्रेसको भावी रणनीतिबारे छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
प्रतिपक्षी भएर सत्तापक्षमाथि सधै आक्रामक बन्नुपर्नेमा काँग्रेस झन् रक्षात्मक बनेको अवस्था छ । अब देउवामाथि काँग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्ने दबाब बढेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुल उद्घाटनमा रोकिएपछि कडा कदम चाल्ने सकेत गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्रविरोधी भनेर अब उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न चेतावनी दिए । समकालिन राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरुमध्ये पौडेलले मात्र ओलीलाई यो हदसम्मको चुनौती दिन सकेका छन् । उनले ओली लोकतन्त्रका लागि नभई ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेल परेको टिप्पणी गरे । यसले पनि राजनीतिकवृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ ।
पौडेललाई तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले काँग्रेसभित्र नयाँ प्रकारको आक्रोश समेत जन्मिएको छ । वरिष्ठ नेतामाथि समेत यस्तो भयो भने देशभरका काँग्रेस कार्यकर्तामाथि कस्तो व्यवहार भयो ? यो प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यसपटक पौडेलले आक्रामक तरिका अपनाएर बेहोशतुल्य काँग्रेसलाई जगाउन खोजेका छन् ।
बुल्दीखोला पुल उद्घाटनको अवरोध घटनाले काँग्रेसलाई जागरुक बनाउन खोजेको छ । उनले पुल उद्घाटन मात्र गरेनन् सरकारलाई कडा चुनौती दिए । पौडेलको यो कदमले उनलाई काँग्रेसभित्र लोकप्रीय बनाएको छ । काँग्रेसको विरोधीसँग जुध्न सक्ने सन्देश पनि पौडेलले दिएका छन् । साथै, सभापति देउवामाथि दबाब सृजना गरेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो र परिवारबाहेक अरुबारे कहिल्यै सोच्दैनन् : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, ९ माघ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि हालतमा
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्को नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्यमा
ओलीविरुद्ध दाहाल-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल-नेपाल समूहले आज राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ
ओलीलाई प्रचण्ड नम्बर एक अपराधी हो, सिध्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छः दाहाल
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
गृह मन्त्रालयमा केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे छः प्रचण्ड
काठमाडौं, ९ माघ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल प्रधानमन्त्री
आज ३०२ संक्रमित थप, ४८० जना डिस्चार्ज
काठमाडौं, ९ माघ । नेपालमा कोरोना भाइरसका आज ३ सय २ जना संक्रमित थपिएका छन्
ओली कम्युनिष्ट पार्टीका भगौडा हुन् : खनाल
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री
केपी ओली हिटलरको नेपाली संस्करणः माधव नेपाल
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जेल हाल्न खोजेकै हुन् ?
काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनपछि नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्ने क्रममा जेलको प्रसंग